Dowladda Soomaaliya oo shacabka mar kale ugu baaqaysa in ay dowladda kala shaqeeyaan horumarka – Radio Daljir
Dowladda Soomaaliya oo shacabka mar kale ugu baaqaysa in ay dowladda kala shaqeeyaan horumarka
Agoosto 15, 2013 3:00 b 0
Muqdisho, August 15, 2013 – Ra?isal wasaaraha Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya mudane Cabdi Faarax Shirdoon ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay, maal-gashiga dalka iyo in ay ka qeyb qaataan sidii dalka dib loogu dhisi lahaa.
Mudane Shirdoon wuxuu ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed in ay kala shaqeeyaan Dowladda talaabooyinka horumarka leh ee ay? qaaday siina wadayso.
Ra?isal wasaaraha ayaa sheegay in kooxda Al-shabaab ay tahay caqabada keli ah ee hortaagan nabada Soomaaliya, kuwaasi oo uu ku eedeyey in aysan dooneyn in dalku dego oo xasilooni iyo nabad ay dadku ku joogaan.
Ra?isal wasaare Shirdoon isagoo arintaasi ka hadlaya wuxuu xusay in dowladiisa ay ku mashquulsan tahay sidii ay u dar-dar gelin lahayd, howlaha ka dhanka ah ururka Al-shabaab.
Xukuumada Federaalka ah ee Soomaaliya waxay ugu baaqday dhowr jeer oo hore shacabka in laga wada shaqeeyo ?amniga iyo dib u dhiska.
Howgallo isugu jira baaritaano iyo kuwa amni sugid ah oo ka socda Magaalada Beledweyne (Dhegeyso)
Maraykanka oo danjire cusub oo soo magcaabay safaaradiisa Soomaaliya xili la bedelay James Swan